Semalt उत्तर प्राय: सोधिने प्रश्नहरूको लागि खोज इञ्जिन अनुकूलनको बारेमा
ठिक छ, यदि तपाईंलाई केहि श doubts्काहरू छन् भने, हामी तपाईंलाई भन्दछौं कि खोजी ईन्जिन अप्टिमाइजेसन डरलाग्दो हुन सक्छ किनकि यो एक पर्याप्त अज्ञात समस्या हो, र सबैजनासँग सही उत्तर दिनको लागि "जादू दर्पण" हुँदैन।
चिन्ता नलिनुहोस्, हामी तपाईंको साथमा छौं। हामी यहाँ खोज ईन्जिन अप्टिमाइजेसनको बारेमा सबै प्रश्नहरूको उत्तर दिन छौं। यी प्रश्नहरूले तपाईंको दिमागलाई छोडिदिन्छ र तपाईं सोध्न कहिल्यै हिम्मत गर्नुहुन्न। "ज्ञात शक्ति हो" भन्ने वाक्यांश SEO समस्याहरू समाधान गर्न आदर्श हो। जति धेरै तपाईंलाई थाँहा हुन्छ, राम्रो तपाईंले आफ्नो वेबसाइट अप्टिमाइज गर्न सक्नुहुन्छ (जुन तपाईंलाई खोज परिणामहरूमा अझ राम्रो ठाउँमा लैजान्छ, अधिक क्लिकहरू, र अन्तमा अधिक ग्राहकहरू)। यो खराब छैन, हैन? त्यसो भए, हामी साधारण एसईओ मुद्दाहरूमा अन्वेषण गरौं:
SEO- खोज इन्जिन अप्टिमाइजेसन को लागी एक्रोनिम, एक खोज इन्जिन अनुकूलन प्रविधी हो। यसको मतलव तपाई ईन्जिन नतिजाहरुमा राम्रो स्थिति प्राप्त गर्न सबै उपायहरू लिन सक्नुहुनेछ (जस्तै गुगल) र प्रयोगकर्ताहरूद्वारा सजिलैसँग पत्ता लगाउन।
SEO ले धेरै चरणहरू र विधिहरू समावेश गर्दछ, जस्तै SEO पृष्ठहरू र वर्णनहरू तपाईंको पृष्ठहरूमा थप्न, तपाईंको छविहरूमा वैकल्पिक पाठ थप्न, तपाईंको वेबसाइटमा ब्याकलिlin्कहरू प्राप्त गर्न, ब्लग सिर्जना गर्ने, आदि। तर यो यसमा सीमित छैन।
SEO र SEM कसरी फरक छन्?
SEO र SEM (खोज इञ्जिन मार्केटिंग को लागी छोटो) को लागी खोज परिणामहरु मा वेब पृष्ठहरु को दृश्यता वृद्धि गर्न को लागी। मुख्य भिन्नता यो हो कि SEM ले भुक्तानी पदोन्नति टेक्नोलोजी समावेश गर्दछ, जबकि SEO ले गर्दैन।
किन SEO मेरो व्यवसायको लागि महत्वपूर्ण छ?
यो सत्य हो: हामी सबै खोजी ईन्जिन प्रयोग गर्दछौं। उदाहरण को लागी, यस बखत तपाईले यो ब्लग पोष्ट पढ्नुभयो भने गुगलमा 60०,००० भन्दा बढी खोजीहरू छन्। स्थानीय तापक्रम बुझ्नदेखि लिएर नजिकको पिजेरिया पत्ता लगाउन, खोज इञ्जिनहरूले हाम्रो दैनिक जीवनमा प्रमुख भूमिका खेल्छन्।
सामान्यतया बोल्दै, यो सम्भावित ग्राहकहरूले तपाईंलाई वा तपाइँ जस्तो व्यवसाय फेला पार्दछ। त्यसकारण, हामी बुझ्दछौं कि अनलाइन बाँच्न र सफलताको लागि खोजी ईन्जिन अनुकूलन आवश्यक छ। ज in्गलको राम्रो रूखको बारेमा सोच्नुहोस्: यदि तपाईंको वेबसाइट अनलाइन छ र कसैले पनि फेला पार्न सकेन भने, के यो अवस्थित छ?
सुझाव: निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंको वेबसाइट संकटमा अवस्थित छैन, र तपाईंको SEO मा काम गर्नुहोस्।
खोजी ईन्जिनहरूले कसरी काम गर्छन्?
संक्षिप्तमा, खोज ईन्जिनले वेब पृष्ठहरूलाई ट्र्याक गर्न, अनुक्रमणिका गर्न र प्रमोट गर्न उन्नत एल्गोरिदमहरूको सेट प्रयोग गर्दछ।
पहिलो चरणलाई "ट्र्याकि" "भनिन्छ। सामान्यतया, यो स्क्यान वा वेब पृष्ठको कोड पढ्ने प्रक्रियाको बारेमा हो।
दोस्रो चरणमा, ट्र्याक गरिएका पृष्ठहरू ठूलो डाटाबेसमा भण्डार गरियो। यसलाई "अनुक्रमणिका" भनिन्छ।
एक चोटि कसैले खोजी क्षेत्र मा क्वेरी प्रविष्ट गरे पछि अन्तिम चरण दिइनेछ। खोजी ईन्जिनहरूले डाटाबेससँग परामर्श गर्दछ र वेब पृष्ठहरू प्रदर्शन गर्दछ जुन त्यो विशेष प्रश्नसँग सब भन्दा सान्दर्भिक छन्।
यो एक धेरै सरलीकृत स्पष्टीकरण हो। थप जानकारीको लागि हाम्रो भ्रमण गर्नुहोस् वेबसाइट semalt.com।
राम्रो एसईओको लागि मैले कति तिर्नु पर्छ?
हाम्रो लागि, यो संभव छ कि राम्रो खोज इन्धन अप्टिमाइजेसनको सेवा debtणमा जानुभएको बिना। राम्रो समाचार यो छ कि तपाईंले खोज ईन्जिन अप्टिमाइजेसनको लागि महँगो व्यावसायिक सेवाहरू भाँडामा लिनु पर्दैन।
वास्तवमा, यदि तपाईं आफ्नो वेबसाइटको एसईओको बारेमा चिन्तित हुनुहुन्छ र तपाईं अनावश्यक रूपमा खर्च गर्न चाहनुहुन्न भने, तपाईं परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो SEO विशेषज्ञहरु। केवल लगानी आवश्यक तपाईंको समय, धैर्य र प्रयास हो। हामीलाई विश्वास गर्नुहोस्; लगानी मा प्रतिफल ठूलो हुनेछ।
के मलाई एसईओ प्रोग्रामिंग कसरी गर्ने जान्नु आवश्यक छ?
पक्कै छैन। वास्तवमा, अब तपाइँ प्रोग्रामिंग नजोगी वेब पृष्ठहरू सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ। यो सत्य हो कि HTML को मूल कुरा थाहा पाउँदा वेबसाइटको संरचना बुझ्न तपाईले सहयोग पुर्‍याउन सक्दछ, तर यदि तपाई गुगलमा राम्रो स्थान प्राप्त गर्न चाहानुहुन्छ भने तपाईले कम्प्युटर कोर्स गर्नुपर्दैन।
स्थानीय SEO के हो?
यो अवधारणाले खोजी परिणामहरूमा देखाइएको विशेष कार्यहरूलाई बुझाउँदछ जब कसैले तपाईंको क्षेत्रमा व्यवसाय खोजिरहेको हुन्छ। तपाईंको स्थानीय खोज इञ्जिन अनुकूलन सुधार गरेर, तपाईं आफ्नो क्षेत्रमा सम्भावित ग्राहकहरूलाई आकर्षित गर्नुहुन्छ, उनीहरूको अनलाइन खोजीहरू गर्ने बाटोमा आधारित हुन्छन्।
उत्तम अभ्यासहरू मध्ये एक अनलाईन निर्देशिकामा रेजिष्ट्रेसन समावेश छ, जस्तै गुगल मेरो व्यवसाय। यसले तपाईंको व्यवसायलाई गुगल नक्शामा प्रदर्शन हुने अनुमति दिनेछ, जसले तपाईंलाई तथाकथित "प्याकेज 3" (खोज परिणामहरूमा नक्सा मुनि तीनवटा परिणामहरू देखाउँदा) सामेल हुन राम्रो अवसर प्रदान गर्दछ।
गुगल खोजीमा कसरी प्रदर्शन गर्ने?
गर्नु पर्ने पहिलो कुरा यो हो: यदि तपाई खोजी ईन्जिनमा स्थान अपलोड गर्न चाहानुहुन्छ भने तपाईले स्क्यान गरेर इन्डेक्स गर्नु पर्छ। यहाँ दिइएका चरणहरू:
तपाईंको पृष्ठहरू प्रमाणित गर्न गुगल खोजी कन्सोल (GSC) प्रयोग गर्नुहोस्
गुगल खोजी कन्सोल (पहिले गुगल वेबमास्टर उपकरण को रूप मा परिचित) वेबसाइट को मालिकहरु को लागी गुगल द्वारा प्रदान गरिएको एक नि: शुल्क सेवा हो। तपाईंको वेबसाइट प्रमाणित गर्न GSC प्रयोग गर्न सिफारिश गरिएको SEO अभ्यासको रूपमा लिईन्छ र गुगललाई तपाईं पृष्ठको मालिक हुनुहुन्छ भनेर जान्न अनुमति दिन्छ।
थप रूपमा, गुगल खोजी कन्सोलले तपाईंलाई तपाईंको पृष्ठहरू बारे महत्वपूर्ण जानकारी पनि प्रदान गर्दछ, जस्तै खोज परिणामहरूमा प्रभाव संख्या, क्लिकहरूको संख्या, र निश्चित कीवर्डहरूको लागि तपाईंको क्रमबद्धता।
यदि तपाई इच्छुक हुनुहुन्छ भने हामी तपाईलाई एउटा प्रदान गर्न सक्छौं तपाईलाई बुझ्नको लागि मद्दतको लागि चरण-देखि-चरण गाइड प्रमाणिकरण प्रक्रिया।
वेबसाइटबाट तपाईंको नक्शा अपलोड गर्नुहोस्
साइट नक्शा मात्र यसको नक्शा हो। यसले तपाईको बिभिन्न पृष्ठहरु एक अर्कामा कसरी जोडिएका छन् देखाउँदछ। खोज इञ्जिनहरूमा नक्शा पठाउन धेरै उपयोगी छ, त्यसैले तपाईं आफ्नो वेब पृष्ठहरू सजिलो र छिटो ट्र्याक गर्न सक्नुहुनेछ, तपाईंको समग्र खोज इन्जिन अप्टिमाइजेसनमा सुधार ल्याउन।
के तपाई अझ बढी जान्न चाहानुहुन्छ? मा अधिक पत्ता लगाउनुहोस् semalt.com।
तपाइँको साइटलाई अनुक्रमित गरिएको छ कि छैन भनेर जाँच्न सब भन्दा सजिलो तरीका भनेको Google खोजी फिल्डमा "तपाइँको साइट" टाइप गर्नुहोस् र केहि देखा परेको छ कि भनेर हेर्नुहोस्। यदि तपाईंको पृष्ठ परिणामहरूमा देखा पर्दछ भने, यसको मतलब यो हो कि तपाईंको पृष्ठ अनुक्रमित गरिएको छ। यदि तपाईं परिणाम तुरून्त देख्नुहुन्न भने, नडराउनुहोस्, किनकि अनुक्रमणिका प्रक्रियामा केहि समय लिन सक्दछ।
महत्वपूर्ण नोट: अनुक्रमणिका अनुकूलनको पर्यायवाची छैन। तपाईंको वेबपेज गुगल द्वारा अनुक्रमित गर्न सकिन्छ, तर यो अझै पहिले पृष्ठमा देखा पर्दैन। यो जहाँ तपाइँको अनुकूलन प्रयास (SEO) खेल मा आउँछ।
म कसरी मेरो SEO सुधार गर्न सक्छु?
सब भन्दा महत्वपूर्ण खोज ईन्जिन अनुकूलन कार्य योजना र जिज्ञासाको साथ शुरू हुन्छ। यससँग, तपाई प्रक्रियामा प्रवेश गर्नुभयो। तपाइँलाई थाहा हुनुपर्दछ सामग्रीबाट डिजाइन गर्न, वेब पृष्ठको प्रत्येक पक्षले खोज परिणामहरूमा तपाइँको रैंकिंगमा प्रभाव पार्दछ।
गुगलको एल्गोरिथ्ममा २०० भन्दा बढी सूचकहरू छन् जुन वेब पृष्ठ वर्गीकरणको भाग्य निर्धारित गर्न मद्दत गर्दछ, तर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तत्त्वहरू जुन वास्तवमै विचार गरिन्छ:
के तपाईंको सामग्री राम्रोसँग लेखिएको छ र उच्च गुणस्तर हो? के तपाईंले सही कुञ्जी शब्दहरू छान्नुभयो? के तपाईंको सामग्री मोबाइल उपकरणहरूमा सजिलैसँग हेर्न सकिन्छ? यी सबै तत्वहरूले रोबोट (गुगल रोबोट) लाई तपाईंको सामग्री बुझ्ने र तपाईंको वेब पृष्ठहरूलाई वर्गीकृत गर्ने तरिकालाई असर गर्दछ।
यो किन हो यदि तपाईं साच्चै आफ्नो र्याकिंग सुधार गर्न चाहानुहुन्छ भने, सामग्री ह्यान्डल गर्नु नै मुख्य हो। यदि तपाइँ पढ्न जारी राख्नुहुन्छ भने, तपाइँले यसलाई कसरी गर्ने भनेर फेला पार्नुहुनेछ।
जब यो एसईओ को लागी आउँछ, तपाईंको वेबसाइट को लिंक अन्य व्यक्तिहरु को लागी स्वीकृति भोट जस्तै हो र खोज इन्जिनहरु द्वारा अत्यधिक सराहना गरीन्छ। त्यहाँ कुनै श doubt्का छैन कि यी लि getting्कहरू प्राप्त गर्नाले तपाईंको वेबसाइटलाई राम्रो बढावा दिनेछ।
ट्र्याकिंग क्षमताहरू, पृष्ठमा एसईओ (पृष्ठमा) र अन्य प्राविधिक पक्षहरू सबै ध्यानमा राखिन्छन्। अन्य चीजहरूका साथै यसमा मेटा शीर्षक र वर्णनको अप्टिमाइजेसन समावेश छ, यदि तपाईंको साइट सुरक्षित छ भने, आदि। शीर्षकहरूको मद्दतले तपाईंको पृष्ठ कसरी संरचित गरिएको छ।
पहिले हाम्रो कुशल र एसईओ उपकरणहरू जाँच गर्नुहोस्। यसले तपाईंलाई पूर्ण र सरल चेकलिस्ट प्रदान गर्दछ कि तपाईं कुनै महत्त्वपूर्ण चरणहरू बिर्सनुहुन्न।
महत्वपूर्ण SEO अपडेटहरू कसरी बुझ्ने?
Semalt ब्लग अनुसरण गर्नुहोस्; हामी नियमित रूपमा तपाइँको सबै SEO प्रश्नहरूको जवाफ दिन एक पूर्ण र मैत्री गाइड प्रकाशित गर्दछौं। यदि तपाईं खोजी ईन्जिन अप्टिमाइजेसनको दैनिक समाचार ट्र्याक गर्न धेरै इच्छुक हुनुहुन्छ भने, तपाईं परामर्श लिन सक्नुहुन्छ semalt.com।
SEO मा कुञ्जी शब्दहरू के हुन्?
कुञ्जी शब्दहरू दुई देखि पाँच शब्द वाक्यांश हुन् जुन सम्भावित ग्राहकहरूले खोजी ईन्जिनमा लेख्छन् जब उनीहरू तपाईंलाई वा तपाईंको जस्तो ब्यापार खोज्दैछन्।
तपाईंको सामग्रीमा सही शब्दहरू छान्नुहोस् र थप्नुहोस्, किनकि गुगल रोबोटहरूलाई तपाईंको पृष्ठको सामग्री राम्रोसँग बुझ्न र यो एक विशेष खोजीको लागि सान्दर्भिक परिणामहरूको रूपमा पहिचान गर्न मद्दतको लागि आवश्यक छ।
कसरी मेरो वेबसाइट को लागी उपयुक्त खोजशब्दहरु खोज्ने?
यस अन्तमा, यसले सबै सम्भावित शब्दहरू सूचीबद्ध गर्दछ जुन आगन्तुकहरू वा भविष्यका ग्राहकहरूले तपाईंलाई इन्टरनेटमा फेला पार्न प्रयोग गर्दछ। कसरी आफ्नो व्यवसाय वर्णन गर्न को लागी सोच्नुहोस्, तर सोच्नुहोस् कि मानिसहरु के अनलाइन खोजिरहेका छन्।
उदाहरण को लागी, जहाँ सम्म तपाईं स्वयंलाई "बगैचा डिजाइनर" को रुपमा वर्णन गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईको सम्भावित ग्राहकहरु "माली" को लागी बढी सम्भावना हुन्छ। के तपाईंलाई थाहा छ? हामी शुरुआतीलाई एको साथ प्रदान गर्दछौं पूर्ण गाईड कसरी गर्नेमा तिनीहरूको वेबसाइटहरूको लागि उत्तम कुञ्जी शब्दहरू फेला पार्नुहोस्।
कसरी एसईओ को लागी पाठ अनुकूलन गर्न? के "महान सामग्री" मानिन्छ?
यदि तपाईंसँग पहिले नै तपाईंको कुञ्जी शव्दहरू छन् भने, तपाईंले राख्नुपर्ने मुख्य ठाउँहरू: SEO तपाईंको शीर्षक, तपाईंको URL, पृष्ठ सामग्री, तपाईंको ब्लगबाट चित्रहरू (सम्भव भएमा) र काम विवरण।
टेक्स्टको क्वालिटी मूल्या to्कन गर्न खोज ईन्जिनहरूले विशिष्ट मापदण्डमा हेर्छन्। राम्रो दर्जा दिन, तपाईंको सामग्री हुनुपर्दछ:
मूल्यवान: जानकारीमा धनी, पाठकहरूको लागि उपयोगी;
अद्वितीय: यो जानकारी कहिँ भेट्टाउन सकिदैन;
ताजा: नियमित अपडेटहरू।
सामान्यतया, एक ब्लग सिर्जना तपाइँको वेबसाइट को लागी उपयोगी, अद्वितीय र अपडेट सामग्री प्रदान गर्न एक उत्कृष्ट तरिका हो।
के छविहरूमा एसईओमा प्रभाव छ?
सरल उत्तर हो हो, यसले पक्कै पनि प्रभाव पार्नेछ। छविहरू पूर्ण रूपले अनुकूलित भएपछि र गुगल छवि खोजीमा फेला पार्न सकिन्छ, जसको मतलब तपाईंको वेब पृष्ठहरू अधिक ट्राफिक प्राप्त गर्न सक्दछन्। तपाईंले यो कसरी गर्नुभयो?
पहिले तपाईले छविमा वैकल्पिक पाठ थप्न निश्चित गर्नुपर्दछ। गुगल र अन्य खोज इञ्जिनहरूले हामीले देख्ने छविहरू "देख्न" सक्दैनन्, त्यसैले तपाईं आफ्नो फोटोहरू, ग्राफिक्स र अन्य छविहरू बुझ्न ईन्जिन रोबोटलाई मद्दत गर्न टेक्स्ट थप गर्नुपर्दछ।
याद गर्नुहोस्, प्रत्येक फोटोको लागि अद्वितीय र वर्णनात्मक वैकल्पिक पाठ थप्न यो महत्त्वपूर्ण छ।
त्यसो भए तपाईले यो सुनिश्चित गर्नुपर्दछ कि पृष्ठमा छविहरू छिटो लोड हुन्छन् र उच्च गुणवत्ता कायम गर्दछ।
UX (प्रयोगकर्ता अनुभव) र SEO बीचको सम्बन्ध के हो?
तपाईंको सामग्रीलाई प्रयोगकर्ताहरूले अनुभव गर्ने र अनुभव गर्ने तरिका एकदम महत्त्वपूर्ण छ। यो वास्तवमै राम्रो श्रेणीको ज्ञात संकेत हो। यो एकाधिक तरिकामा गणना गरिन्छ: प्रयोगकर्ता पृष्ठमा रहन्छ समय, प्रदर्शित पृष्ठहरूको संख्या र बाउन्सको प्रतिशत।
यसैले यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ कि तपाइँको वेबसाइट न केवल महान देखिएको छ तर शक्तिशाली र नेभिगेट गर्न सजिलो पनि छ।
मेरो ब्लग पोष्टमा मैले कति कुञ्जी शब्दहरू समावेश गर्नुपर्दछ?
तपाईको सामग्रीमा कुञ्जी शब्द थप्ने एक उत्तम तरिका हो खोज परिणामहरूको आधारमा अधिक पेशेवर दर्शकहरूलाई आकर्षित गर्ने। जीवनमा राम्रो चीजहरू जस्तै, यहाँ कुञ्जी सन्तुलित छ। तपाईले खोजशब्दहरू कम्तिमा एक पटक शीर्षक र लेखको पहिलो अनुच्छेदमा प्रदर्शन गर्नुपर्नेछ, र कम्तिमा दुई वा तीन पटक लेखको बाँकी भागमा।
जे होस्, एक लेख हुनुपर्दछ कुञ्जी शब्दहरूको संख्या लेखमा शब्दहरूको संख्यामा निर्भर गर्दछ।
अवश्य पनि, जब तपाइँको लेख एक शीर्षकको बारेमा हुन्छ, कुञ्जीशब्दहरू तपाइँको पाठमा सहजै प्रदर्शन गरिन्छ यसलाई राख्नुपर्दैन। जे होस्, यदि तपाईंलाई लाग्छ कि पाठ एकदम दोहोरिएको छ भने, तपाईं समानार्थी शब्द प्रयोग गर्न स्वतन्त्र हुनुहुन्छ। खोज ईन्जिनहरू अझ राम्रा र केहि विषयहरू र सम्बन्धित शब्दहरू बुझ्नको लागि अझ राम्रो हुँदै गइरहेका छन्, त्यसैले केहि खोजशब्दहरूमा सीमित हुनु आवश्यक छैन।
लेख को आदर्श लम्बाई के हो?
प्रति लेख शब्दहरूको आदर्श संख्या प्रमाणित भएको छैन, तर धेरै अध्ययनहरूले दावी गर्दछ कि "लामो" सामग्रीले खोज परिणामहरूमा राम्रो प्रदर्शन गर्दछ। अर्को शब्दहरुमा, र यो सामान्य नियम हो भनेर थाहा पाउँदा, तपाईले पहिले आफ्नो लक्षित श्रोता र बजारको मापदण्डलाई विचार गर्नुपर्छ। लम्बाई मात्र महत्त्वपूर्ण कुरा होईन। तपाईंको सामग्रीको गुणवत्ता, बहुमूल्य तस्वीरहरू र भिडियोहरू सहित, पाठकको सन्तुष्टि र प्रतिबद्धता, खोजी परिणामहरूमा तपाईंको उत्कृष्ट स्थिति निर्धारण गर्दछ।
कुरा के हो भने, तपाइँको लक्षित श्रोतालाई तपाइँको सामग्रीको मजा लिन अधिक समय दिनको लागि सबै उपायहरू लिन सक्नुहुन्छ जुन तपाइँको एसईओमा सकारात्मक प्रभाव पार्दछ।
मैले मेरो ब्लगमा कति चोटि पोष्ट गर्नुपर्छ?
एक ब्लग ले सँधै तपाइँको वेबसाइट लेटस को रूप मा ताजा हुन मद्दत गर्दछ। अधिक सामग्री तपाईंले पोस्ट गर्नुभयो, अधिक सामग्री गुगल बट्स खोजी गर्दछ। वास्तवमा तपाईले दैनिक पोष्ट गर्नु पर्दैन, तर एउटा ताल फेला पार्ने प्रयास गर्नुहोस् जुन तपाईं र तपाईको वर्कफ्लोलाई सूट गर्दछ। न्यूनतम एक महिनामा एक पटक हो, तर यदि तपाइँ एसईओको लागि प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ भने हामी सिफारिस गर्दछौं कि तपाइँ हप्तामा एक पटक वा अधिक पोस्ट गर्नुहोस्।
SEO ब्याकलिंक्स के हुन्?
यी बाह्य पृष्ठहरूबाट तपाईंको वेब पृष्ठमा लिंकहरू हुन् (वा तपाईंको कुनै पृष्ठहरू)। ब्याकलिks्कहरू खोज ईन्जिन अप्टिमाइजेसन रणनीतिको महत्त्वपूर्ण अंश हुन्। अधिक लि links्कहरू तपाईले प्राप्त गर्नुहुन्छ, त्यत्ति महत्त्वपूर्ण तपाईंको साइट खोजी ईन्जिनहरूले विचार गर्दछन्।
गुगलको नजरमा, वेबसाइट अधिक विश्वसनीय र आधिकारिकको रूपमा देखिने छ।
ब्याकलिks्क प्राप्त गर्न, साधारण कार्य होईन, तर तपाईं पहिले ब्लगहरू, वेब पृष्ठहरू, र सम्बन्धित अनलाइन प्रकाशनहरूलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ, र त्यसपछि त्यसको उल्लेख गर्न प्रयास गर्नुहोस्। यस प्रकाशनलाई हेर्नुहोस् र राम्रो प्रचारको लागि केहि मार्केटिंग सल्लाहहरू पढ्नुहोस्।
याद राख्नुहोस्, यो सधैं महत्त्वपूर्ण छ Google को दिशानिर्देशहरू पालना गर्न र तथाकथित "लि scheme्क योजना" मा भाग नलिन, जुन एसईओको कुकर्महरू मध्ये एक मानिन्छ।
यदि तपाईं गुगल वेबमास्टर दिशानिर्देशहरूको बारेमा अधिक जान्न चाहनुहुन्छ भने, कृपया भ्रमण गर्नुहोस् Semalt वेबसाइट।
के सामाजिक नेटवर्कहरूले SEO लाई असर गर्दछ?
यो लामो बहस हो। यसको बारेमा यस तरिकामा सोच्नुहोस्: जति धेरै व्यक्ति तपाईंको सामग्रीमा पुग्दछन्, उनीहरू आफैं यसलाई अनलाइन साझेदारी गर्न चाहान्छन्। यसले तपाइँको वेबसाइट ट्राफिक बढाउनेछ, जुन तपाइँको एसईओ को लागी धेरै उपयोगी छ।
तसर्थ, यद्यपि यो वास्तवमा प्रमाणित श्रेणीकरणको संकेत होइन, सामाजिक नेटवर्कको प्रदर्शनले प्रक्रियामा अप्रत्यक्ष प्रभाव लिन सक्छ।
के मेरो डोमेन नामले एसईओ लाई असर गर्दछ?
हो, पक्कै पनि। तपाईंको डोमेन नाम पहिलो चीजहरू मध्ये एक हो जुन रोबोटहरूले तपाईंको वेबसाइटको बारेमा बुझ्दछन्। यो किन तपाईको डोमेन नाम छान्नु भन्दा पहिले केहि अनुसन्धान गर्नु राम्रो विचार हो किन तपाईको ब्यापार संग सब भन्दा सान्दर्भिक कुञ्जी शव्द निर्धारित गर्न को लागी।
के तपाईंलाई थप मद्दत चाहिन्छ? यहाँ केहि महत्वपूर्ण सल्लाहहरू छन् तपाईको वेबपेजको लागि सहि डोमेन नाम छनौट गर्नका लागि।
मेटा ट्याग के हुन्?
जब हामी मेटा ट्यागहरू (मेटा ट्यागहरू) को बारेमा कुरा गर्छौं, हामी प्रत्यक्ष रूपमा तपाईंको मेटा शीर्षक वा एसईओ शीर्षक र तपाईंको मेटा विवरण उद्धृत गर्दछौं। तपाइँको यूआरएलको छेउमा, यी भागहरूले खोजी परिणामहरूमा देखाइएको स्निपेट बनाउँदछन्। यो पाठको तत्त्वहरूमा ध्यान दिन धेरै महत्त्वपूर्ण छ किनकि रोबोटले यसलाई तपाईंको वेब पृष्ठको सामग्री बुझ्नको लागि स्क्यान गर्दछ।
शीर्षक ट्याग के हो? मलाई यसको किन आवश्यकता छ?
शीर्षक ट्याग (H1 देखि H6 सम्म) शीर्षक हो र शिर्षकको "SEO अवधि" हो। यो पृष्ठ को लागी संरचना र पदानुक्रम प्रदान गर्दछ। एक अखबारमा जस्तै यसको बारेमा सोच्नुहोस्: मुख्य शीर्षक लेख को सबै भन्दा महत्वपूर्ण शीर्षक हो र अन्य शीर्षकहरु धेरै सान्दर्भिक छैनन्। यसको मतलव तपाईको H1 ट्यागहरू हाइलाइट गरिएको हेडलाइन्सको लागि प्रयोग गरिनु पर्दछ, H2 ट्यागहरू तल्लो-स्तर जानकारीको लागि प्रयोग गर्नुपर्दछ, र त्यस्तै।
शीर्षक ट्याग थपेमा तपाईंको सामग्री पढ्न सजिलो हुन्छ, चाहे यो पृष्ठ वा गुगल ब्राउजरको पर्यटक हो। यो तपाइँको वेबसाइट को खोज ईन्जिन अनुकूलन को लागी धेरै उपयोगी छ।
पुनर्निर्देशनको अर्थ के हो?
रिडायरेक्ट 1०१ हामीलाई थाहा छ कि सबै ट्राफिकको बाटो एक पृष्ठबाट अर्कोमा परिवर्तन गर्न प्रयोग गरियो। सामान्यतया, यस कार्यले गुगललाई खोज ईन्जिनहरू बताउँदछ कि पृष्ठको यूआरएल (यूआरएल) परिवर्तन गरिएको छ र रोबोटहरूलाई नयाँ लक्ष्य के हो थाहा दिनुहोस्।
यसले नयाँ पृष्ठलाई एसईओ पावर कायम राख्न मद्दत गर्दछ जुन अघिल्लो पृष्ठले प्राप्त गरेको छ। यो कार्य डुप्लिकेट सामग्रीको समस्याबाट बच्न आवश्यक छ जुन गुगलले वास्तवमा मनपर्दैन र सजाय दिन्छ।
खोज परिणामहरूमा देखा पर्न कति समय लाग्छ?
खोज इंजिनले तपाईंको पृष्ठ प्रदर्शन गर्न केहि समय लिन सक्दछ, विशेष गरी यदि यो नयाँ हो भने। हामी निर्दिष्ट समयको बारेमा कुरा गर्न सक्दैनौं किनकि यो धेरै कारकहरूमा निर्भर गर्दछ, जस्तै तपाईंको बजार प्रतिस्पर्धा र कुञ्जी शब्दहरू, तपाईंले प्रकाशित गर्नुभएको सामग्रीको गुणस्तर र ताजगी, र तपाईंको वेबसाइटको अप्टिमाइजेसन।
यस तरिकाले, तपाईंले बुझ्नु पर्दछ कि परिणाममा राम्रो स्थिति लिने यो रातोरात हुने छैन। तपाईंले गर्नु भएको परिवर्तनहरूलाई विचार गर्न तपाईंले गुगलको रोबोटलाई समय दिनुपर्नेछ। त्यो बाहेक, एसईओ एक छोटो दौडको भन्दा म्याराथन जस्तै हो; यो एक चलिरहेको प्रक्रिया हो, जसको मतलब तपाईले नियमित आफ्नो वेबसाइट अपडेट गर्नुपर्नेछ मूल र ताजा गुणस्तर सामग्री पाउन राम्रो स्थिति पाउनको लागि।
जैविक ट्राफिक मैले कसरी मापन गर्ने?
कार्बनिक कार्य नाप्नको लागि राम्रो तरिका Google को उपकरणहरू प्रयोग गर्नु हो। गुगल एनालिटिक्स र गुगल खोज कन्सोल तपाईं अनलाइन पृष्ठ को प्रदर्शन को बारे मा अधिक जानकारी प्रदान गर्न डिजाइन गरीएको छ।
गुगल खोजी कन्सोलमा, "खोजी ट्राफिक" क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि "खोजी विश्लेषण" क्लिक गर्नुहोस् मुख्य क्वेरी र मुख्य पृष्ठ फेला पार्न जुन तपाईंलाई गुगल क्लिकहरू प्रदान गर्दछ।
गुगल एनालिटिक्समा, "अधिग्रहण" सेक्सनमा जानुहोस् र "वेबसाईट" मा क्लिक गर्नुहोस् तपाईको वेबसाइटमा जैविक ट्राफिक हेर्नका लागि। त्यहाँ क्लिक पछि, तपाईं एक चार्ट देख्नुहुनेछ। तपाई डाटा तुलना गर्न सक्नुहुन्छ र जैविक यातायात मा परिवर्तन एक विशिष्ट समय अवलोकन द्वारा जाँच गर्न सक्नुहुन्छ र अघिल्लो समय अवधि संग तुलना गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईं गुगल एनालिटिक्स कसरी प्रयोग गर्ने बारे निश्चित हुनुहुन्न भने हामी तपाईंलाई मार्गनिर्देशन पनि प्रदान गर्नेछौं!